Ezona ngcebiso ziPhambili zoRhwebo ukuba yi Pro! -Funda 2 urhwebo ngo-Okthobha u-2021
Ezona ngcebiso ziBalaseleyo zokuRhweba nge2021
13 Julayi 2020 | Ukuhlaziywa: 11 Juni 2021
Ukukhangela iingcebiso zokuthengisa zangaphambili? Ukurhweba nge-forex kunokuba yindlela ebalaseleyo yokwenza inzuzo engaguqukiyo kunye nokwahlula iphothifoliyo yakho yorhwebo. Kodwa, ukuba ungorhwebo lwe-newbie- kusenokwenzeka ukuba ufuna izikhombisi ezimbalwa ukuqinisekisa ukuba ufumana umsebenzi wakho we-forex kunyawo lwasekunene.
Ngokubalulekileyo, ukubeka ezi ngcebiso kunokukunceda ungene kwizakhono zakho ezikhoyo zorhwebo, kunye nokufunda into entsha.
Sibeke ndawonye ezili-10 zeengcebiso zokurhweba ezibaluleke kakhulu ze-2021 esicinga ukuba kufanelekile ukuba uziqwalasele.
Ingcebiso 1: Qonda iiMarket ze-Forex
Kuya kufuneka sigxininise ukuba kubaluleke kangakanani ukuqonda kakuhle imarike ye-forex ngaphambi kokubeka engozini imali yakho. Ngokuthatha ixesha lokuzifundisa ngezinto ezinje ngababini bemali, i sasaza kunye noxinzelelo - unokuzisindisa kuxinzelelo kunye nemali ekuhambeni kwexesha.
Kananjalo, kwicandelo lokuqala lephepha lethu leengcebiso zorhwebo, sidwelise ezinye zezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uziqonde ngaphambi kokuba ungene.
Isibini semali ngasinye senziwe ngeemali ezi-2 ezahlukeneyo. Ixabiso lesibini ngasinye ke lisekwe kwizinga lotshintshiselwano ngeemali ezimbini.
Njengomzekelo, masisebenzise i-EUR / USD. Kwesi sibini semali, i-EUR 'yimali esisiseko', kwaye i-USD 'yimali yokucaphula'. Oku kuyakuba njalo nokuba yeyiphi na imali oyisebenzisayo.
Ngamanye amagama, imali esisiseko iya kuhlala icatshulwa kuqala, kwaye imali yesibini iya kucatshulwa okwesibini. Okona kubaluleke kakhulu, zombini eyokuqala neyesibini imali inokuthomalalisa okanye yomeleze, kwaye ke izinga lokutshintshiselana lihlala litshintsha.
Ukuba imali esisiseko iyakhula ngokuthe kratya ngokuchasene nemali yesilinganiso, ixabiso lesibini semali liya kunyuka. Kwelinye icala, ukuba isiseko semali siba buthathaka, ixabiso lesibini semali liya kuwa.
Imiyalelo yeNtengiso ye Forex
Imiyalelo ikuvumela ukuba ungene okanye uphume kurhwebo onomdla kulo. Le miyalelo iwela ngokwamacandelo ama-2 athi 'thenga iiodolo' kwaye 'uthengise iiodolo'. Ukubeka ngokulula, i-odolo yokuthenga ibonisa ukuba ucinga ukuba isibini semali siya kunyuka ngexabiso, kwaye ukuthengisa ukuthengisa kuthetha okwahlukileyo.
Masithi isibini sakho semali yi-EUR / USD kwaye ixabiso le-EUR yi-1.1334
Unokurhanela ukuba i-EUR iza kunyuka ithelekise ne-USD, ke kwimeko enjalo, unokukhupha i-odolo yokuthenga kumthengisi wakho.
Emva koko, kuya kufuneka unqume ukuba uyafuna ukusebenzisa iodolo 'yentengiso' okanye 'umda' woku-odola. Ngokubeka i-odolo yentengiso ngokusisiseko ubeka iodolo yokuthenga okanye yokuthengisa kwixabiso elilandelayo elinokufumaneka.
Ngoku, khumbula ukuba isibini semali ebuza amaxabiso akunakulindeleka ukuba sibe yi-1.1334 kwisikhonkwane, njengoko amaxabiso etshintsha kwisibini-ngomzuzwana. Kananjalo, i-odolo yentengiso inokukufumanela amaxabiso ngaphezulu okanye ngezantsi kwe-1.1334.
Kwelinye icala, ukuba ubuya kubeka i-odolo yomda, kufuneka uchaze elona xabiso ulifakileyo kwintengiso. Kodwa ke kuya kufuneka ulinde ukuba ixabiso lithelekiswe nomnye umthengisi ngaphambi kokuba iodolo iqhubeke.
Ngamafutshane, urhwebo ngalunye lwe forex luquka amaxabiso amabini ahlukeneyo- ixabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa. Umahluko phakathi kwamaxabiso amabini yinto eyaziwa ngokuba kukusasazeka. Kubalulekile ukuba ube nokuqonda okusisiseko kokusasazeka, kuba le yinxalenye exabisekileyo yohambo lwakho lokurhweba ngaphambili.
Umzekelo, masicinge ukuba ixabiso lokuthenga ngu-1.1335 kwaye ixabiso lokuthengisa ngu-1.1330.
1.1334 (thenga) - 1.1330 (thengisa) = 0.0004 (iipipi).
Kule meko, i sasaza Ngu-0.0004, ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga nelokuthengisa.
Kuyo yonke imihla yosuku lokurhweba, ukusasazeka kuguquguquka. Oku kusasazeka kugungqiswa zizinto ezahlukeneyo ezinje ngokuhlawula amatyala (ukuba impahla inokuthengwa okanye ithengiswe ngokukhawuleza kangakanani) kunye nokungazinzi (intshukumo eguqukayo yeentshukumo zorhwebo lwe-forex).
Iibini ezinkulu zemali zithengiswa ngevolumu ephezulu kakhulu kunezezimali ezinkulu okanye ezingaqhelekanga. Ukubeka ngokulula, ngakumbi kwimfuno yemali, iindleko eziphantsi zokurhweba ziya kuba. Kungenxa yokuba ukusasazeka kuya kuba sezantsi (ukuqina).
Amanani amakhulu okanye angaphezulu kwemali exotic athambekele ekubeni asasazeke ngokubanzi kunamajors ngenxa yevolumu yokuthengisa esezantsi. Kananjalo, aI-lways zama ukuzenza ubungakanani bokusasazeka, njengoko oku kunokubangela ukuba ube neendleko eziphezulu zokurhweba.
Ngokusisiseko, isibonelelo semali ebolekiweyo sisetyenziselwa ukuphinda-phinda ukubuyela kwakho kwaye liyinxalenye enkulu yorhwebo ukwenza inzuzo. Xa uvule iakhawunti kunye nomthengisi wakho we-forex uya kuthi unikwe amandla.
Ukuba ucinga malunga nomhlaba ngokubhekisele kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu, ulawula ipropathi ebiza kakhulu ngentlawulo encinci. Ngamanye amagama, ulawula i-asethi enkulu usebenzisa imali encinci.
Ukuphakanyiswa kwe-Forex kunokuvela kwi-1: 2 yonke indlela ukuya kuthi ga kwi-1: 500 okanye nangaphezulu.
Ukuba ubheja i- £ 200 yengxowa-mali yakho yokurhweba kwaye usebenzisa i-1: 20 (okanye i-20x), oku kuthetha ukuba endaweni yokuthengisa nge- £ 200, ngoku uthengisa nge- £ 4,000 (£ 200 x 20).
Ngokubheja okufanayo kwe- $ 200, ukuba uzuze i-1% ubuya kwenza i- £ 2 (1% ye- £ 200 yesitokhwe). Nangona kunjalo, ngokuxhamla kwe-20x, inzuzo yakho iya kuba yi- £ 40 (£ 2 x 20)
Xa kuziwa ekunyuseni, kubalulekile ukwazi imida yakho. Ngokumisela umyinge wakho wokuphakama kumgca ngamava akho, akunakufane uzifumane ukwimeko apho ulahlekelwa ngaphezulu kunokuba unokufikelela.
Ngale nto engqondweni, licebo elihle ukuba ujonge iimali zakho kwaye usebenze ukuba yintoni uhlahlo-lwabiwo mali lwakho, kunye nento onokukhululeka kuyo ukuphulukana nayo. Njengencam esecaleni, wi-atch yokuphuma kweepali zemali ezingafunekiyo ezidityaniswe nomgangatho, njengoko amanqanaba aphezulu okunyanzeleka enokubangela ingxaki.
'IPip' sisichazi esithi 'point in percent' kwaye sisebenza njengelona xabiso liphantsi apho isibini semali esiya kutshintsha phakathi kwintengiso yentengiso. Ngamagama alula, umbhobho ubonakalisa naluphi na utshintsho oluncinci oluphawulwe kwisibini semali.
Ubungakanani obuqhelekileyo banceda ukukhusela abatyali mali kwiilahleko ezinkulu. Umbhobho unokulinganiswa ngesiseko semali okanye ikowuti, kodwa ihlala imiselwe emgangathweni kwaye ihlala iyindawo yokugqibela yedesimali yekowuti.
Umzekelo, unesicatshulwa se-GBP / USD eyi-1.2400. Ukucacisa, oku kuthetha ukuba kuyo yonke i- $ 1 ungathenga i-1.2400 yeedola zaseMelika. Ukuba kukho utshintsho kwaye umbhobho uza kunyuka nge-1, emva koko isibini ngoku sinokuxabisa i-1.2401.
Ngokubanzi, xa kufikwa kwizibini zemali ze-USD umbhobho uya kuba yi- $ 0.0001 yexabiso elicatshulweyo, elihlala libizwa ngokuba yindawo yesi-1. Kananjalo, a Umbhobho yi-1/100 ye-1%; okanye iindawo ezine zokugqibela. Olona khetho luphambili kulo mthetho kukurhweba ngababini abaqulethe iiyen zaseJapan, ezihlala zineendawo ezimbini zokugqibela.
Umda uthelekiswa nentlawulo esezantsi. Yimali ebekwe nguwe ukuze ukwazi ukurhweba kunye nokugcina izikhundla ngaphakathi kwintengiso.
Ngelixa isikhundla sakho sisebenza, umda wakho uya kujongwa ngumthengisi we-forex ukuba unegalelo kumdlalo. Kungenxa yokuba umrhwebi uboleka kumthengisi. Ke, ukuba ubune- £ 100 kwaye unqwenela ukurhweba nge- £ 1,000 - amandla akho anokufikelela kwi-1: 10. Kwelinye icala, umda wakho uya kuba yi- $ 100, njengoko le yi-10% yesayizi yesikhundla se- £ 1,000!
Icebiso 2: Yenza iSicwangciso kwaye unamathele kuso
Into ephambili yokuba nomsebenzi ophumeleleyo kwaye onenzuzo kwezorhwebo kukuba nesicwangciso sakho esisesakho. Isicwangciso sakho sokurhweba siza kubonelela ngesakhelo esihle sokukukhokela kumaxabiso emali asoloko etshintsha.
Ngale nto engqondweni, enye yezona ngcebiso zintle zokurhweba esinokukunika zona kukucinga malunga neenjongo zakho zokutyala ixesha elide. Kwisicwangciso sakho, ungabandakanya iithagethi zenzuzo yemihla ngemihla, ulawulo lwebhanki, kunye nenani leeyure ngosuku ofuna ukuzichitha kuphando nakurhwebo.
Ngexesha elithile ngexesha lezorhwebo, kufuneka kubekho isicwangciso sokuphuma. Le yindawo apho uvala indawo kwaye ke-uya kuba wenze inzuzo okanye ilahleko. Ngale nto ithethwayo, kubalulekile ukuba unenjongo ekujoliswe kuyo ngaphambi kokuba ubeke iodolo.
Umzekelo, masicinge ukuba uthengisa nge-GBP / USD. Ucinga ukuba ixabiso lesibini liya kuphakama, kwaye ke ubeke i-oda yokuthenga. Kodwa, ngaphambi kokuba wenze, ubeka i-odolo yokuthatha inzuzo. Oku kufikelela kwi-1% yobukhulu besikhundla. Ukubeka ngokulula, iithagethi zakho zenzuzo yi-1%, kwaye xa le nzuzo ichukunyisiwe indawo yakho iya kuvalwa ngokuzenzekelayo.
Ekugqibeleni, ukurhweba ngeethagethi zenzuzo kwenza kube lula ukuvavanya ukuba ingaba urhwebo lufanelekile na emngciphekweni ngokukunceda ekucoceni izigqibo ezimbi.
Uphando lwemihla ngemihla / ixesha lokuzinikela
Kungangumbono olungileyo ukukhetha iimarike ezimbalwa ukuze ujolise kuzo ukuqala kwakho. Kwaye xa kufikwa kulawulo lwexesha, kulungile ukuba uzibekele ezinye iinjongo. Nje ukuba ucinge malunga nexesha elingakanani oza kuzibophelela ngalo kurhwebo lwe-forex, zama ukunamathela kulo.
Ikwangumbono olungileyo ngokwenene ukunikezela ixesha lokuphanda nje kunye nokufunda iindaba zezezimali kunye nohlalutyo lobuchwephesha, njengoko oku kuya kukunceda wenze izigqibo ezifanelekileyo zokurhweba. Ngokubalulekileyo, mnabaphi na abathengisi abagcina idayari. Ngokwenza inqaku lomsebenzi wakho wokurhweba, inokukunceda kakhulu ukuba uphinde uphonononge isicwangciso sakho sokurhweba kwixesha elizayo.
Ingcebiso 3: Soloko uqala ngeAkhawunti yeDemo
Unokuxolelwa ngokucinga ukuba iiakhawunti zedemo ye-forex zezorhwebo ngokutsha. Ngokuchasene noko, ziluncedo kakhulu kubarhwebi abatsha bobabini kwaye Abarhwebi abanamava ngokufanayo. Ukurhweba kwimarike ejika ngaphezulu kwe- $ 5 trillion yonke imihla kunokuba yinto eyoyikisayo. Ke, iyavakala into yokuba noqheliso lokuqhuba kwiakhawunti yedemo ebonisa imeko-bume yobomi bokwenyani.
Ayinamsebenzi nokuba ufuna ukufunda iintambo kwasekuqaleni, okanye ukuba ufuna ukuziqhelanisa nezicwangciso-qhinga ezintsha zokurhweba nge-forex-ukuvula iakhawunti yedemo sisigqibo sobulumko kuye nawuphi na umrhwebi.
Ngeakhawunti yedemo ye-forex, uya kuba nokufikelela kwizalathi zobuchwephesha kunye nolwazi lokuhamba kwamaxabiso-njengoko ubuya kwenza kwihlabathi lokwenyani. Umahluko kukuba, awuyi kusebenzisa imali yokwenyani. Endaweni yoko, uya kunikwa isixa esimiselweyo semali 'yedemo' oza kurhweba nayo. Uya kufumana inketho yeakhawunti yedemo ye-forex kumaqonga amaninzi e-broker, kwaye kuthatha imizuzu nje ukubhalisa.
Ingcebiso 4: Uphando lobuchwephesha kunye nolusisiseko
Uhlalutyo lobuchwephesha kunye nolusisiseko zizichasi ezipheleleyo, kodwa zombini zinezibonelelo zazo xa kufikwa kuphando kunye nokuqikelela amaxabiso e-forex.
Kananjalo, le yenye yezona ngcebiso zibaluleke kakhulu zokurhweba ngaphambili ukuba uzibambe. Ukunceda ukucoca inkungu, apha ngezantsi uyakufumana inkcazo emfutshane yeendlela zombini zophando.
Uhlalutyo olusisiseko lufunda yonke imeko yezemali. Oku kwenziwa ngokuhlalutya nantoni na enokuba nefuthe kumaxabiso emali- ezinje ngezidubedube zezopolitiko zehlabathi, uqoqosho (intswela-ngqesho, njl.
Ngokusisiseko, unikezelo kunye nemfuno zichonga ixabiso lemali, ke kuyacaca ukuba kufundwe nantoni na enokuba nefuthe kwimpilo yezoqoqosho. Ngamanye amagama, ukuba uqoqosho lusebenza kakubi, imali yayo inokubanzima.
Kukho ii-angles ezahlukeneyo onokuzisebenzisa ukunceda kuhlalutyo olusisiseko, njenge:
Amagqabantshintshi avela kwi-IMF
'Imethiyori yesiphithiphithi semathematika' isebenza ngokupheleleyo nohlalutyo lobuchwephesha. Oko kukuthi, okuzayo kufuneka kwehle, kwaye ke iipateni zihlala ziphinda phinda ngokuhamba kwexesha. Ngokusetyenziswa kwezixhobo zohlalutyo, idatha yezobuchwephesha, iitshathi zamaxabiso kunye nezalathi zohlalutyo lobuchwephesha -ezembali amanyathelo ixabiso inokukunceda ubone ukuba yintoni enokwenzeka kwixesha elizayo.
Uhlalutyo lobuchwephesha lusebenzisa le voliyumu yimbali kunye nedatha yamaxabiso ngethemba lokubona iipateni, ikakhulu ngenxa yentengiso kunye nokurhweba ngokuhamba kwexabiso lokuhamba kwengqondo kunye neendlela (ezihlala zilandela ipateni). Olu hlobo lohlalutyo alulinganisi naliphi na ixabiso elisisiseko. Endaweni yoko, uninzi lwabarhwebi bakholelwa ukuba iipateni zamaxabiso ziya kuphinda zibuye kamva emgceni, ke kuyavakala ukuba ufunde nembali yexabiso le-forex ntshukumo.
Ukusebenzisa olu lwazi sisiqalo esihle xa kuziwa kulwazi lokungena kunye nokuphuma kwezorhwebo. Njengomrhwebi we-forex, uyakwazi ukubona ukuba ukuthenga / ukuthengisa inzala kuyehla okanye kuyenyuka, kunye nokuba nombono ongcono wento amalungu eemarike anokuyenza ngokulandelayo.
Nazi iintlobo ezintathu eziphambili zetshathi zohlalutyo lobuchwephesha onokuthi uzifunde:
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zezona zixhobo zisetyenziselwa ukuhlalutya itshathi.
Ukuba uyafuna, ungazidibanisa izixhobo zakho zobugcisa kunye. Ngapha koko, olu lwazi longezelelweyo lunokukwenza ube ngumrhwebi ongcono. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iqonga ngalinye lomthengisi we-forex liya kwahluka, kwaye ayizizo zonke eziya kuba nezixhobo ezifanayo. Ke, yenza uphando kuqala kwaye ubone ukuba yeyiphi efanelekileyo isitayile sakho sokurhweba.
Ingcebiso 5: Yazi imida yakho yemali
Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba uyeke nini xa kusiziwa kurhwebo. Ngobunzima, ukuvumela iimvakalelo zokurhweba ezinjengokubawa ziba ngcono kunokuba yingozi.
Ukwazi imida yakho kubalulekile ukuba ufuna ukuba ngumrhwebi ophumeleleyo, kwaye ke sineengcebiso ezimbalwa zokurhweba nge-forex ezidweliswe apha ngezantsi eziza kukunceda ukhombe kwicala elifanelekileyo.
Yima kunye neMida yeMiyalelo
Ukunyusa okuphezulu kunokubonelela abatyali mali ngeenzuzo ezinkulu, kodwa kuhlala kunokwenzeka ukuba banokujamelana nelahleko enkulu, nayo. Imiyalelo emibini engundoqo abathengisi bayathanda ukuyibeka 'kukumisa' kunye 'nokunciphisa' iiodolo, njengoko oku kubanceda ukuba baphathe ngcono izikhundla zabo kwintengiso.
Umyalelo osikelwe umda uza kukuvumela ukuba usete imin okanye ixabiso lexabiso lokuthenga okanye lokuthengisa. Ngokuchasene noko, i-stop order ikuvumela ukuba usete ixabiso elithile ongathanda ukulithenga okanye ulithengise, okuthetha ukuba awukwazi ukuya ngaphaya kwelo xabiso. Ukuba ungumtyali-mali onesikhundla esifutshane uya kubeka umda wexabiso ngezantsi Ixabiso langoku lemarike njengethagethi yokuqala. Ukuyilawula, ungabeka i-odolo yokumisa ngaphezulu kwexabiso langoku.
Ukuba ungumtyali mali onendawo ende uza kubeka umda wexabiso ngaphezu Ixabiso langoku lemarike ukuze wenze ingeniso ngalo. Uya kuthi emva koko usete i-odolo yokumisa ngezantsi kwexabiso langoku ukuze uzame ukubamba ilahleko kwindawo yakho.
Ukuma kunye nokuNqanda ii-odolo yindlela elungileyo yokuba wena njengomrhwebi ukwazi ukuthatha inzuzo kunye nokunciphisa umda weefowuni, kwaye yonke into izenzekelayo xa isikhundla sihleli. Le odolo ibhetyebhetye kakhulu, ke unokuzilungisa ngalo naliphi na ixesha- ngokweemeko zentengiso ezikhoyo ngoku.
Ukuyeka ukulandela umkhondo
Eyona njongo iphambili yokumisa umkhondo kukususa isidingo sokuba uhlengahlengise kwaye ungenelele njengoko imarike ishukuma, oko kuthetha ukuba unokuqinisekisa ukuba uya kude kurhwebo ngenzuzo. Abarhwebi bayathanda ukuthi 'ukunciphisa ilahleko yakho imfutshane, kwaye vumela inzuzo yakho iqhubeke'. Ukubeka ngokulula, kulapho i-trailing stop order inokungena khona.
Njengokuba besesitshilo, ngokungafaniyo nomyalelo wokumisa rhoqo, isitopu esimiselweyo sinokumiselwa kwangaphambili ukuba sihambe kunye neemarike zikuvumela ukuba ulandele iindlela zentengiso ngaphandle kokujonga rhoqo okwenzekayo.
Ukuma okulandelayo kuya kuguqula ilahleko yokumisa kwixabiso labo lekhefu (okanye ixabiso lokuqala). Oku kuthetha ukuba ukuba isibini semali ye-GBP / USD siya ngasemva kwaye sichasene nawe, uyakwazi ukukhusela iinzuzo osele uzenzile ukusuka kwindawo yokuqala.
Ingcebiso 6: Ziqhelanise Neendleko zeNtengiso ye-Forex
Nokuba uphumelele kangakanani umsebenzi wakho wokurhweba, uya kuhlala ufumana ezinye iindleko apha endleleni. Ezinye zeendleko onokuthi uhlangane nazo ziya kukhethwa ngokuzithandela, ezinje ngeentlawulo ezinxulunyaniswe neenkonzo zohlalutyo lobuchwephesha, ukwenziwa komyalelo owandisiweyo, kunye neenkonzo ezithile zeendaba zeendaba.
Enye yeengcebiso zokurhweba kwangaphambili esinokukunika zona kukuqinisekisa ukuba uyaziqonda ngokuthe ngqo iifizi, iikhomishini okanye ezinye iindleko ezingenakuthintelwa. Ezi ndleko ziya kwahluka ngokuxhomekeka kumrhwebi ngamnye, ke jonga amaxabiso ngaphambi kokuba usebenze.
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zeefizi eziqhelekileyo kunye neentlawulo onokuthi uhlangane nazo njengomrhwebi we-forex.
Ngamanye amaxesha ukuhlawulwa ngabarhwebi xa ubeka urhwebo. Banokuza ngeendlela ezimbini; Imirhumo esisigxina (nokuba yeyiphi na ivolumu yorhwebo) okanye umrhumo othelekiswayo (okukhona unyusa umthamo, ikhomishini iya kuba phezulu)
Umzekelo wentlawulo yesihlobo ngumrhwebi ekuhlawulisa i-1 yeepawundi nge-100,000 nganye yemali oyithengisayo okanye oyithengayo. Ukuba ufaka ikhontrakthi exabisa i-1 yezigidi ze-GBP / i-EUR, umrhwebi uya kuthatha i- $ 10 kwikhomishini. Ukuba uthenga i- $ 10 yezigidi, umrhwebi uya kuthatha ikhomishini eyi- $ 100.
Kumrhwebi uhlawulisa umrhumo onxulumene ne-1%, emva koko indawo eyi- £ 1,000 iya kukuxabisa nge- $ 10. Isikhundla se- £ 2,000 sasiza kubiza i- $ 20, njalo njalo.
Iindaba ezimnandi zezokuba abarhwebi abaphambili be forex bayakuvumela ukuba ungene kwaye uthengise izikhundla ngaphandle kokuhlawula naziphi na iikhomishini zorhwebo. Uya kufumana ukhetho lwabarhwebi abaphantsi kwesi sikhokelo.
Njengoko sigubungele eli phepha, ukusasazeka kuyintlawulo oza kuthi umrhwebi wakho we-forex akuhlawulise ngayo ukuba urhwebe.
Umrhwebi uya kukunika isicatshulwa samaxabiso amabini kwisibini semali ngasinye ekufuneka besinikezele. Amaxabiso amabini aya kuba lixabiso lokubhida (ixabiso lokuthenga) kunye nexabiso lokubuza (ixabiso lokuthengisa).
Nangona ukusasazeka kuhlala kuxoxwa ngeepips (njengoko besenzile ngaphambili), ngamanye amaxesha kulula ukuguqula oku kube yipesenti. Oku kuyakunika umbono ocacileyo wokuba uhlawula malini, kwaye kufuneka wenze malini kwinzuzo ukuze nje uphule.
Njengengcebiso esecaleni, gcina iliso kwiindaba zezezimali, ukungazinzi kunye nokuhlawula amatyala. Kungenxa yokuba umrhwebi unokuthatha isigqibo sokwandisa ukusasazeka kwabo ukulungiselela iimeko zentengiso ezingazinzanga.
WIsikhukula ubambe isikhundla kwimarike, enye indleko ekufuneka uyazi ngayo 'yiroller yasebusuku'.
Eli lizinga lenzala yobusuku bonke encanyathiselwe kwimali nganye oyithengayo okanye oyithengisayo. Kungenxa yokuba izibini ze-forex zinezixhobo ezixhaswayo zemali, oko kuthetha ukuba uboleka imali ngokufanelekileyo kumthengisi. Ngokwendalo, oku kutsala umdla.
Isixa-mali eso sixhomekeke kukwahluka phakathi kwamazinga enzala amabini (ngemali nganye). Ezi ntlawulo zigqitywa ngamaziko amakhulu ezemali hayi i-broker yakho.
Imirhumo yokuqengqeleka ubusuku bonke isekwe kwiipesenti ezonyukayo njengoko kusetyenziswa amandla. Ukubeka ngenye indlela, okukhona usebenzisa okungaphezulu, kokukhona iindleko ziya kuba phezulu.
Enye indleko ekufuneka uyikhumbule yimirhumo yokutya kwedatha, kwaye ihlala ihlawuliswa rhoqo ngenyanga. Njengoko idatha ikunceda ufumane ukuqonda ukuba ungene nini kwaye uphume nini kwintengiso, indlela yokulawula izikhundla zakho kunye nalapho kufuneka ubeke khona ukuphulukana nokuyeka- yindleko ebalulekileyo onokuyifuna ukuba uyithwale.
Umboneleli ngamnye uya kuba nentlawulo eyahlukileyo yokutya kwedatha, ke oko kuhlala kuxhomekeke kubunjani kunye nomgangatho wenkonzo ekunikezelwayo. Sincoma ukuzama ezimbalwa ngaphambi kokuzibophelela kwimirhumo yarhoqo ngenyanga yobhaliso.
Kukho umahluko omkhulu xa kufikwa kwidiphozithi kunye nemirhumo yokurhoxa. Kungenxa yokuba ekugqibeleni iya kuxhomekeka kumrhwebi ekuthethwa ngaye, njengoko iqonga ngalinye liza kuqhuba iinkqubo ezahlukeneyo.
Uninzi lwabarhwebi be-forex abayihlawulisi nayiphi na imali yokurhoxa konke konke, kodwa kunjalo, soloko ujonga imigaqo kunye neemeko ngaphambi kokuba ubhalise. Okufanayo kuya kwimirhumo yedipozithi.
Khumbula ukuba indlela oyikhethileyo yokuhlawula inokuchaphazela ubude bexesha elithathayo xa ufaka idiphozithi ukufikelela kwiakhawunti yakho yorhwebo, kodwa ke ezinye iindleko zinokufumaneka ngokuxhomekeke kumntu wesithathu okanye kwibhanki oyifaka nayo.
Ingcebiso 7: Ukulawula iimvakalelo zakho zorhwebo
Ngokwengqondo yokuthengisa, zintathu iimvakalelo eziphambili zabantu abanamava xa bethenga kwaye bethengisa iiasethi- ukunyoluka, uloyiko kunye nethemba.
Xa urhweba ngokunyanisekileyo, ukuphulukana nolawulo lwazo naziphi na ezi mvakalelo zintathu kunokukufaka emanzini ashushu. Uqeqesho lweemvakalelo luhlala luthathwa njengesitshixo sempumelelo, kwaye ke eyona ndlela yokufezekisa le yimithetho embalwa elula.
Zama ukuba ungathengisi ngokubawa. Ukubawa kuhlala kuthathelwa ingqalelo njengeyona imbi kwiimvakalelo ezintathu zomrhwebi. Kungenxa yokuba kunokukhokelela kubarhwebi ukuba benze izigqibo zokungxama xa bekhangela loo mbiza yegolide ekupheleni komnyama.
Zama ukuqaphela nakuphi na ukungaqiniseki kwimarike ye-forex. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ungakwenza oku ngokubeka isicwangciso sokurhweba ekusebenzeni kunye nokuphanda kwimithombo yolwazi eyahlukeneyo ngaphambi kokwenza naziphi na izigqibo.
Ungalawula ulindelo lwakho ngokunciphisa ukuqikelela ukuba uza kwenza inzuzo enkulu ngokukhawuleza. Endaweni yokuba umonde ungoyena ndoqo kwaye le yindlela elungileyo yokuziqhelanisa nolawulo lomngcipheko ngokunjalo.
Ukuba ufuna ukusiphepha isilingo sokudlula kuhlahlo-lwabiwo mali, beka urhwebo lwakho, emva koko uyeke nje. Ukujonga urhwebo rhoqo kunokukhokelela kwisilingo.
Ingcebiso 8: Musa ukoyika ukutshintsha iSicwangciso sakho
Abanye babathengisi be-forex abanamava kakhulu phaya bafunga ngokutshintsha isicwangciso sabo amaxesha ngamaxesha kunye nokuphononongwa ngokutsha kwezicwangciso zabo zokurhweba. Ukuba ubusebenzisa isicwangciso esifanayo okwethutyana kwaye ungaziva ngathi ufumana izibonelelo ekufuneka uzenzile, akukho nto inokukuthintela ekuzameni enye indlela.
Ngale nto ithethwayo, unokufumanisa ukuba imeko yakho yezemali ayisafani nakuqala kwaye kufuneka uphinde uvavanye uhlahlo-lwabiwo mali kunye neenjongo. Njengoko sichukumisile ngaphambili, indlela entle yokwenza oku kukuvula iakhawunti ye-demo ye-forex ukuze ukwazi ukuziva ukuba ingaba isicwangciso esitsha siza kusebenza kuwe kunye nendlela othanda ngayo ukuthengisa.
Ingcebiso 9: Qonda indlela yokuseka iAkhawunti yokuRhweba ngeNgxowa-mali
Ngaphandle kokuzimisela ukuchaza okucacileyo, eli candelo leengcebiso zethu zokuthengisa eziphezulu ze-10 zilungele umntu oza kuqala. Ngamanye amagama, ukuba awuzange ubeke intengiso enye ye-forex ebomini bakho, ngekhe wazi ukuba ungayiseta njani iakhawunti yokurhweba!
Iindaba ezimnandi zezokuba yile Inxalenye ilula kwaye iqonde ngqo phambili, kodwa siqulunqe inyathelo elilula ngesikhokelo sinyathelo ukuze uqalise nangona kunjalo.
Inyathelo 1 -Fumana iBroker
Kufuneka ufumane umthengisi ofanelekileyo kwisitayile sakho sokurhweba. Sinikezele icandelo elingezantsi ngendlela yokufumana enye kwaye ujonge ntoni, ukuba ufuna naluphi na uncedo. Sikwadwelise abarhwebi bethu abaphambili abahlanu abaphambili be-2021 ukuya ezantsi, ukuba awunalo ixesha lokuphanda iqonga ngokwakho.
Inyathelo 2-Khetha iAkhawunti yokuThengisa
Yenza isigqibo malunga naluphi uhlobo lweakhawunti yokuthengisa ofuna ukuyivula. Ezinye ziya kuba ngamanqanaba amancinci kunye neemfuno ezisezantsi ze-akhawunti yorhwebo, ngelixa ezinye zezabathengisi abanamava.
Inyathelo 3-Ifom yesicelo
Ngoku kuyakufuneka ugcwalise ifom yesicelo kwiwebhusayithi yomthengisi. Ulwazi olufunekayo luyahluka, kodwa kuhlala kubandakanya igama lakho elipheleleyo nedilesi, kunye neenkcukacha zonxibelelwano kunye nomhla wokuzalwa.
Kuya kufuneka ukuba ubaxelele kancinci ngemeko yakho yezemali efana nengeniso yenyanga, inqanaba lengqesho kunye namava okuthengisa. Kwakhona, umthengisi ngamnye we-forex uya kwahluka kancinci
Ngaphambi kokuba ugqibezele ukubhaliswa kweakhawunti yakho ye-forex, kuya kufuneka ubonakalise ukuba ungubani. Uninzi lwabarhwebi be-forex luya kufuna ikopi esencwadini yakho yokundwendwela okanye yesazisi.
Abanye banokufuna ikopi efundwayo yeleta eluncedo okanye ileta enegama lakho nedilesi yokuhlala kuyo. Oku kuhlala kufanele ukuba kuvele kwithuba elithile lexesha, yithi ngaphakathi kweenyanga ezi-6.
Ukuthatha ukuba ufumene uqinisekiso phantse kwangoko (okuhlala kunjalo); ngoku ungasebenzisa iinkcukacha zakho zokungena kwiakhawunti yakho yokuthengisa.
Inyathelo 6: Fundisa iAkhawunti yakho yoRhwebo
Ngoku ungafaka imali kwiakhawunti yakho yorhwebo. Iindlela zokuhlawula ezinikezelwa zihlala zilungile kwaye zibandakanya; debit / amakhadi etyala, ukudluliselwa kwebhanki, kunye ne-e-wallets ezinje ngeNeteller, iPaypal kunye neSkrill.
Ingcebiso 10-Ukukhetha uMthengisi we Forex
Kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe umrhwebi olungileyo, kuba eli iya kuba liqabane lakho kwezorhwebo ekuncedayo ukuba uhambe indlela yakho kwintengiso ye-forex.
Ezinye zezinto ekufuneka uzivavanye xa ukhetha umthengisi we-forex ohlangabezana neemfuno zakho zezi:
Ngaba umrhwebi ulawulwa ngumzimba onelayisensi yomntu onjalo FCA, ASIC, okanye iCySEC?
Zingaphi iiperi zemali uluhlu lomrhwebi?
Ngaba ukhuphiswano kangakanani nomrhwebi kwimirhumo nakwisebe lekomishini?
Ngaba umthengisi unikezela ngokusasazeka okuqinileyo?
Ngaba iqonga lokurhweba eligcwele ziimpawu zobugcisa kunye nezixhobo zokufunda kwitshathi?
Sifuna malini isixa sedipozithi?
Ukuthatha ingqalelo ukuba kungathatha ixesha elingakanani na ukukhetha i-forex broker, kwicandelo elilandelayo sixoxa ngokufutshane ngamaqonga alungileyo e2021.
Iiplatifti zorhwebo eziBalaseleyo ze2021
Awunalo ixesha lokukhetha umthengisi we-forex ngokwakho? Ukuba kunjalo, apha ngezantsi uya kufumana ukhetho lwamaqonga alawulayo anikezela ngemirhumo yokhuphiswano, iimfumba zezibini zangaphambili, kunye namava orhwebo olungenamthungo.
I-AVATrade ngumrhwebi osekwe kwi-Intanethi onika yonke into kwi-forex, ii-indices, izinto zorhwebo kunye nee-CFD zesitokhwe. Unokurhweba ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini, kwaye usasazeka kwiiparanti ezinkulu zemali ziqinile. Unokukhetha kwi-MT4 okanye kwiqonga le-AVATrade, zombini zibuye zibuye nezixhobo zokurhweba eziphambili. I-AVATrade ilawulwa kakhulu, yamkela iimfumba zeendlela zokuhlawula, kwaye ifuna idipozithi encinci ye- $ 100 nje ..
Siyathemba ukuba ulufumene iphepha lethu leengcebiso malunga nokuthengisa kwangaphambili ukuba luncedo ekufumaneni ukuqonda okukuko kwendlela yokuba ngumrhwebi ophumeleleyo. Ngokubalulekileyo, kubaluleke kakhulu ukuba ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela ezisebenza ngayo iimarike zaphambi kokuba uqale, kwaye unesicwangciso sexesha elide esisebenzayo.
Kufuneka wenze njalo Nika ingqalelo zonke iindleko ezichaphazelekayo kurhwebo lwe-forex, ezinje ngokusasazeka, iikhomishini, kunye nokuxhasa ngemali ubusuku bonke. Xa kuziwa ekunyuseni ukwandisa ukuzuza kwakho, kunokwandisa ilahleko zakho. Oku kunokuba siseti enkulu, ngakumbi ukuba uhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo.
Kananjalo asinakugxininisa ngokwaneleyo ekubalulekeni kophando lobuchwephesha kunye nolusisiseko xa kufikwa kurhwebo lwe-forex. Kukho isixa esikhulu sezixhobo zokurhweba kwangaphambili ezikhoyo kwizandla zakho, ke qiniseka ukuba uyisebenzisa ngokupheleleyo loo nto.
Konke kuzo zonke, enye yezona ngcebiso ezilungileyo zokuthengisa i-forex esinokukunika yona ukuqala nge-akhawunti ye-demo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuziqhelanisa kwenza ugqibelele.